FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULL-PEI - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bull-Pei
Alika mitambatra Bulldog / Sinoa Shar-Pei mifangaro
'Daisy the Bull-Pei amin'ny 19 volana. Milanja 65-70 pounds izy ary mbola alika kely ihany. Alika 'sosialy' be dia be izy ary tia olona sy alika hafa. Mbola biby fiompy tsara izy ary 'Mpanjakavavy' ao an-tranonay! '
Ny alika Bull-Pei dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny English Bulldog ary ny Shar-pei . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Ity i Daisy, 65 kilao antsika, Bull-Pei, eo amin'ny 19 volana. Nandany ny tontolo andro izy niaro ny tranonay, nanenjika ny jirofo sy ny androngo, ary ny fanjonoan'ny alika mandalo. Ankehitriny dia nihinana feno ny kibony izy ary nisotro ronono natory! Milalao mafy izy ary matory mafy. Tsy mahazatra azy ny hanaitra antsika mandritra ny fofonaina amin'ny alina. Endrey izany tarehy izany! '
Daisy the Bull-Pei amin'ny 10 volana— 'Ny dadany dia fotsy anglisy Bulldog ary ny reniny dia brown Shar-pei . Alika be fitiavana izy ary tia olona, ​​alika ary saka mihitsy aza. Tsy mifanena amin'ny olon-tsy fantatra mihitsy izy ary afaka mampiala voly. Misotro amin'ny fandroana vorona izy ary tia mihantona ambonin'ny koveta ary mijery azy feno rano. Tena mora vaky trano izy, fa aleony ny any ivelany. Tiany ny mandeha an-tongotra. Manana vatana be hozatra sy palitao malefaka izy. Amin'ny ankapobeny, dia biby fiompy mahafinaritra izy ary toa mifangaro tsara amin'ny karazany. '
pinature bitika chihuahua mifangaro volontany
Daisy the Bull-Pei puppy at 7 herinandro old (alika anglisy Bulldog / Shar Pei hybrid)
Yazmin the Bull-Pei puppy amin'ny 7 herinandro - 'Yazmin dia volom-borona lilac tsara tarehy Bull-Pei. Manana ketrona taonina izy ary palitao fohy fohy sy mahafinaritra. Izy dia iray amin'ireo zana-kazo avy amin'ny fako ankehitriny. '
Yazmin the Bull-Pei puppy amin'ny 7 herinandro izay mandeha manodidina ny ahitra.
Laboratoara mavo 1 taona
'Ity no mpianakavianay vaovao, Bull-Pei antsoina hoe Matilda. 8 herinandro izy amin'ireo sary ireo. Ny reniny dia purebred English Bulldog ary razazavavy madio Shar pei . Mainty daholo ny palitaony. Ao am-bavany dia misy loko manga mainty eo amin'ny paletany ambony sy teboka mainty eo ambanin'ny lelany. Te hanana Bulldog anglisy aho ary ny vadiko kosa mila Shar Pei, ka nifankahita teo afovoany izahay ary nanantena fa tsy hanana olana ara-pahasalamana lehibe izy na avy amin'ny karazany roa. Na dia rehefa mandray olona vaovao ao amin'ny tranonay vaovao aza izahay, dia mino aho fa handeha hiaraka amin'ny mpiompy izay mitady hanatsara ny karazany ary hifikitra amin'ny volombava. Taorian'izay rehetra nandroso sy nandrasana dia efa novakiako tamin'ny Internet ny olona mifampitolona amin'ny fifangaroan'ny karazany roa. Mazava ho azy fa ny fanoloran-tena madio sy ny fampiofanana sahaza azy miaraka amin'ny fotoana. Mino izahay fa hanome azy ny vintana tsara indrindra amin'ny fiainana ary amin'ny fanaovana izany dia eo izy sakafo avo lenta ary manana dokotera vetivety fotsiny. Mino aho raha karazany mifangaro na madio io dia tokony homenao azy ireo hatrany ny fotoana tsara indrindra amin'ny fiainana. Na dia nieritreritra toy izany aza ny rehetra dia tsy hisy alika any amin'ny fialofana koa. Tandremo ihany koa izay hahatongavanao amin'ny fifangaroan'ireo karazany roa ireo, mety hiafara amin'ny Alfa ary zaza kely tena maditra. amin'ny fiofanana mety ary manantena aho fa hahita ny toerany ao an-tranonay izy ary hankafy ny fiainany. Izaho dia nijery betsaka an'i Cesar Millan ary mampiasa ny teknikan'izy ireo be dia be hanampiana amin'ny fampiofanana. '
Matilda ilay zanak'omby Bull-Pei mainty hoditra amin'ny 8 herinandro miaraka amin'ny kilalaony.
Matilda ilay zanak'omby Bull-Pei mainty tamin'ny faha-4 volana— 'Matilda dia Bull-Pei, ny reniny dia Bulldog anglisy madio ary ny rainy dia Shar Pei madio. Nentinay nody tany an-trano ilay zazavavinay, tamin'izy 8 herinandro. Mahagaga izy manodidina ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra ary tia milalao alika amin'ny habe rehetra. Ny saka etsy ankilany tsy dia mitomany loatra ho azy ireo izy ary tena liana nefa tsy tian'izy ireo ny fomba fangihafany erak'izy ireo lol. Ny zavatra iray dia azo antoka, isaky ny mifoha amin'ny misasakalina aho dia azonao antoka fa hahita azy eo amin'ny toerako izy rehefa miverina !!! Miezaka mangalatra ny toerako foana izy amin'ny alina !!! '
Matilda ilay zanak'omby Bull-Pei mainty tamin'ny 4 volana
laboratoara mavo sy pitbull mifangaro
'Ity dia alika kely vavy Bull-Pei 4 herinandro any Alabama. Izy io dia hazo fijaliana famolavolana Sinoa Shar Pei sy English Bulldog. Miorina mafy izy ireo, misy hatoka matevina, hozatra ary telozoro ny endriny ary mpiara-miasa mahatoky mavitrika. Manana ketrona sy hoditra malalaka izy ireo fa tsy ny olana ara-pahasalamana amin'ny Bulldog anglisy madio akory.
JJ zanak'alika Bull-Pei amin'ny 5 herinandro— 'JJ dia sôkôla / manga volom-borona Bull-Pei. Ny Bull-Pei dia lakilasy eo anelanelan'ny Bulldog anglisy sy Shar Shar Pei sinoa. Izy ireo dia biby goavam-be mahery setra sy mahafinaritra. Tiako ny ketrona! '
JJ zanak'alika Bull-Pei amin'ny 5 herinandro
Alikan-jaza zanak'omby Bull-Pei avy amin'ny Kennels Wrinkle Bluff
shih tzu mifangaro bichon frize
Sugar the Mini Bull-Pei toy ny alika kely amin'ny 3 herinandro— 'Sugar dia Bulldog Anglisy mifangaro amin'ny Mini Shar-Pei.'
Sugar ny Mini Bull-Pei amin'ny alika kely amin'ny 3 herinandro
boribory anglisy sy boribory anglisy
lab pit bull mix sary
Zavatra manondro mainty laboratoara Mix
sisin-tany collie jack russell mix alika kely
lavaka sy fifangaroan'ny heeler manga